Warshadaha Caps China iyo soosaarayaasha | SJJ
] Koofiyadaha looma isticmaalo kaliya in laga ilaaliyo qorraxda, sidoo kale waa shay moodada ah. Ku fiican dhiirrigelinta iyo sida filimada, alaabada durugsan ee anime. Waxaan bixin karnaa koofiyado tayo sare leh munaasabadaha qaarkood iyo waxqabadyada muhiimka ah. Tayada caadiga ah oo leh qiima jaban ayaa sidoo kale la heli karaa, mashaariicda qaarkood waxay leeyihiin qiime bartilmaameed markaa waxaan bixin karnaa talooyinka ugu fiican.
Koofiyadahalooma isticmaalo oo keliya in laga ilaaliyo qorraxda, sidoo kale waa shay moodada ah, oo u wanaagsan dhiirrigelinta iyo sida filimada, alaabooyinka durugsan ee anime. Waxaan siinnay macaamiil badan, badankoodu waxay dalbadaan safafka filimada caanka ah iyo sumadaha shirkadda daabacaadda ka dibna waxay siiyaan koofiyadahaas shaqaalahooda, waxay la jaanqaadayaan ku habboonaanta shaqada. Iyo koofiyadaha ayaa caan ku ah tartamada isboortiga qaarkood, ololaha xayaysiinta, ololaha doorashada. Carruurtu waxay jecel yihiin koofiyadaha, haweenku waxay jecel yihiin koofiyadaha, ragga waxay jecel yihiin koofiyadaha, dadka waayeelka ah waxay jecel yihiin koofiyadaha. Koofiyadaha waxay ku habboon yihiin dhammaan noocyada aadanaha adduunka oo dhan. Waxaan ku sameyn karnaa koofiyadaha qaabab kala duwan oo leh cabbirro kala duwan, sida dhererka hore, cabbirka darafka, godadka gadaal, xargaha xargaha, gudeyaasha gudaha, khadadka tolidda, badhanka kore iyo wixii la mid ah. Calaamadaha waxaa loo habeyn karaa siyaabo kala duwan, qaabab ama cabbirro kala duwan. Midabka buluugga ah, caddaanka, madow, tan, burgundy, jaalaha ayaa badanaa loogu talagalay koofiyadaha. Dharka ama waxyaabaha kale ee koofiyaduhu way kala duwanaan karaan iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, si loo daboolo midabada pantone. Koofiyadahayagu waa deegaan si loo buuxiyo heerka imtixaanka ee EU ama USA.
Waxaan bixin karnaa koofiyado tayo sare leh munaasabadaha qaarkood iyo waxqabadyada muhiimka ah. Tayada caadiga ah oo leh qiima jaban ayaa sidoo kale la heli karaa, mashaariicda qaarkood waxay leeyihiin qiime bartilmaameed waxaan bixin karnaa talooyinka ugu fiican. Waxaan ku siin doonaa xalka ugu fiican mashaariicdaada isgaarsiin xirfadeed iyo qiimayaal tartan ah.
Noo dooro inaan noqonno lamaanahaaga, hel fikradaha ugu fiican.
Waxyaabaha: Canvas, suuf, polyester, polyester-suuf, denim, fiber akril, nylon, maro mesh, PU, ​​maqaar.
Style: 5 ama 6 darfaha, marka loo eego qeexitaanka macaamiisha
Cabbirka: Cabbirka dadka waaweyni waa qiyaastii 58 ~ 62 mm, cabbirka carruurta waa 52 ~ 56 mm
Habka Logo: daabacaadda silkscreen, kala iibsiga kulaylka, sublimation, tolidda PVC/daabac/logo PU, rhinestones, alaabta adag iyo wixii la mid ah
Lifaaqa hagaajinta cabbirka gadaashiisa: Velcro, suunka caaga ah, suunka birta, kooxda laastikada iyo wixii la mid ah
Ma jiro MOQ xaddidan
Hore: Alaabooyinka Dhiirrigelinta Qoryaha
Xiga: Chips Turub
koofiyadaha baseball -ka
Koofiyadda Baseball -ka
Clips Koofiyadaha Golf